Enterprise Social Media Marketing Platform Endri-javatra | Martech Zone
Fampisehoana sehatra fampiroboroboana ny haino aman-jery sosialy Enterprise
Alarobia, Martsa 10, 2021 Alatsinainy Martsa 15, 2021 Douglas Karr
Raha fikambanana lehibe ianao, dia mazàna lafiny enina mitsikera ny lozisialy orinasa ilainao foana:
Account Hierarchies - angamba ny fiasa tena angatahina amin'ny sehatry ny orinasa dia ny fahaizana manangana hierarchies kaonty ao anaty ny vahaolana. Noho izany, ny orinasa ray aman-dreny dia afaka mamoaka amin'ny anaran'ny marika na franchise eo ambanin'izy ireo, miditra amin'ny angon-drakitra, manampy amin'ny famoahana sy fitantanana kaonty marobe, ary amin'ny fifehezana ny fidirana.
Fomba fizahana - Ireo orinasam-pandraharahana mazàna dia manana sosona fankatoavana hiatrehana ny laharam-piaraha-miasa eo amin'ny lalàna, ny lalàna ary ny anatiny. Ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy, ohatra, dia mety hifindra amin'ny mpiara-miasa amin'ny mpamorona sary, amin'ny mpitantana, amin'ny ara-dalàna, hiverina any amin'ny tonian-dahatsoratra, hatrany amin'ny mpanonta. Ny fanatanterahana ireo asa tanana ireo amin'ny alàlan'ny mailaka na takelaka dia tsy voafehy intsony
Fanarahan-dalàna, fiarovana, hazo ary backup - Amin'ny orinasam-panjakana voafehy be na voadidy ho an'ny daholobe, ny fiarovana no zava-dehibe indrindra ka ny sehatra dia takiana matetika handraisana ny fizotry ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo, ary hananana tahiry anatiny sy tahiry momba ny asa ao anatin'ny rafitra.
Fidirana tokana (SSO) - Ny orinasa dia maniry ny fifehezana anatiny ireo rindranasa ampidiriny ka ny fidirana an-tsehatra amin'ny sehatra dia tantanina amin'ny alàlan'ny departemanta IT na ny sehatr'izy ireo.
Mifehy ny fidirana - Ny andraikitra sy ny fahazoan-dàlana dia manakiana ny rindranasan'ny orinasa mba hiantohana fa tsy misy olona afaka mandingana ireo fizotrany ekena na hanao hetsika izay tsy nahazoany alalana.
Fifanarahana haavo momba ny serivisy (SLA) - Amin'ny sehatra manerantany, kritika ny fotoana iasana ka ny fanekena ny SLA dia takiana matetika amin'ny sonia fifanarahana amin'ny sehatr'asa rehetra. Ary koa, ny fikojakojana sy ny fihenan'ny fotoana dia havoaka ampahibemaso mba hahazoana antoka fa tsy manelingelina ny asa izy ireo.
Fanampiana amin'ny fiteny maro - Miaina anaty toekarena manerantany isika, noho izany ny fahaizana manohana fiteny marobe ao anatin'ny sehatry ny mpampiasa ny sehatra ary koa mamoaka amin'ny fiteny maro dia manakiana. Mampalahelo fa matetika ny fiteny miankavia sy miankavia dia eritreretina rehefa miakatra ny sehatra ary avy eo sarotra ny miverina sy mamerina manamboatra ny vahaolana.
Faritra maromaro - Mety ho gaga ianao amin'ny tsy fandinihan'ny orinasa tanora fotoana maharitra rehefa mamoaka fifandraisana. Ankoatry ny fametrahana ny faritry ny fotoana ampiasain'ny mpampiasa ao anaty lampihazo, azonao atao ve ny mandahatra ny fifandraisana kendrenao mankany amin'ny faritry ny tanjona kendrena? Orinasa maro no manana ny kaonty faritra misy ny kaonty fa tsy mampiditra faritry ny fotoana manerana.
Integrations - Fampiharana momba ny programa (API) sy ny fampidirina amina vokatra hafa amin'ny rafitra hafa dia manadanja indrindra amin'ny fampandehanana automatique, fidirana angon-drakitra ary ny fanaovana tatitra amin'ny fotoana tena izy.
Insurance - Miaina ao anatin'ny tontolo litigie isika, noho izany ny fepetra takiana amin'ny sehatra iray dia manana fiantohana ampy hanaronana ny fitoriana rehetra dia tsy maintsy atao ao anatin'ny sehatry ny rindrambaiko orinasa ihany koa. Angamba nisy nijirika ny sehatra ary nisy ny fitoriana nateraky ny mpanjifa farany… mety ho tompon'antoka amin'ny vola lany ny mpamatsy anao.
Sehatra media sosialy Enteprise
Ny tsirairay etsy ambony dia mila ampidirina ao amin'ny sehatra media sosialy raha orinasa orinasa ianao. Ireo sehatra media sosialy matetika dia manana ireto fiasa manaraka ireto:
Fomba fitantanana - Ny fahaizana miteraka filaharana avy amina vondrona mpampiasa iray ao anatin'ny rafitra mankany amin'ny iray hafa dia tena ilaina. Ny mpampiasa tsirairay dia samy manana ny anjarany sy ny permis izay mametra ny fahaizany. Ohatra:
Voatonona an-tserasera ny marikao (miaraka na tsy nasiana marika). Azo alefa any amin'ny varotra ve ny fangatahana raha toa ka manadihady izy? Ho an'ny fanohanan'ny mpanjifa raha olan'ny mpanjifa izany? Mivarotra raha angatahan'ny haino aman-jery?
Manana fandaharam-potoanan'ny fampielezan-kevitra ianao izay mampiditra ny famoahana sosialy amin'ny fe-potoana voafaritra. Moa ve ny seha-pifaneraserana eo amin'ny haino aman-jery sosialy mandrisika sy milahatra miasa izay mivezivezy amin'ny ekipa atiny, mankany amin'ny sary na ekipan-tsarinao, mankany amin'ny ekipanao ara-dalàna na mpitantana, amin'ny alàlan'ny fankatoavana sy ny fandaharam-potoana?
Fandaharam-potoana sy kalandrie - Amin'ny ambaratonga orinasa sy ny kaontim-bola, azonao atao ve ny manivana sy mijery ny kalandrie media sosialy anao ary manome andraikitra anao?
Fanadihadiana ara-tsosialy sy ara-pihetseham-po - Amin'ny ambaratonga orinasa sy zana-kaonty, azonao atao ve ny manaparitaka fanentanana fihainoana ara-tsosialy ho an'ny olona, ​​ny vokatra ary ny indostria miaraka amin'ny famakafakana ny fahatsapana? Azonao atao ve ny mamaky avy hatrany ny fangatahana ao anaty mba hampandre ny ekipa mety hamaly? Azonao atao ve ny mitatitra ny fahatsapana rehefa mandeha ny fotoana mba hahazoana antoka fa mitazona fifandraisana tsara amin'ny mpanjifanao ianao?
Integrations - Azonao atao ve ny miasa ao anatin'ny sehatra afovoany hifandraisana, handefasana hafatra, ary hamoahana isaky ny fantsona haino aman-jery sosialy sy kaonty izay tantananao amin'ny ambaratonga orinasa na kaonty? Azonao atao ve ny mamerina ny angona hiverina amin'ny fanohanan'ny mpanjifanao na ny rafitry ny fifandraisan'ny mpanjifa raha misy ny fangatahana? Azonao atao ve ny manosika ny fanontaniam-barotra amin'ny rafitra iray hanampiana hamantatra ireo vinavina sy hampifandray ireo teboka eo anelanelan'ny fampielezan-kevitra sy ny fikolokoloana ny varotra?
Fampidirana fitsangatsanganana - Azonao atao ve ny mamela ny mpivezivezy omnichannel sy hetsika amin'ny alàlan'ny hetsika media sosialy amin'ny fifandraisana ho singa iray manampy?
Machine Learning - Fampiasana AI hahazoana fahazoana hevi-dalina kokoa amin'ny marika ankapobeny, resaka an-tserasera, fidirana amina hafatra manokana (teny lakile, sary), ary ny mety hisian'ny fahazoana, fivarotana ambony na fitazomana.
Tatitra sy Dashboard - Ho an'ny hetsika rehetra, azonao atao ve ny mamorona tatitra mafonja amin'ny ambaratonga orinasa sy ny kaonty izay azo sivanina mora, zarazaraina ary avy eo ampitahaina amin'ny hetsika manerana ny fampielezana, vanim-potoana na fe-potoana manokana?
Ireo endri-javatra ireo dia miampy ireo fiasa mahazatra anao amin'ny haino aman-jery sosialy izay ahafahan'ny mandeha ho azy, fanatsarana, fandaharam-potoana ary kalandrie ny ezaka ataon'ny haino aman-jery sosialy.
Salesforce Social Studio dia manome ny fiasa rehetra ilaina amin'ny Enterprise Social Media Management, ao anatin'izany:
Fitantanana - fitantanana mpampiasa sy fidirana manerana ny vokatra Salesforce.
Mamoaka - ny fahaizana mandamina sy mamoaka amin'ny kaonty sy fantsona maro.
Ampandraiso anjara - ny fahaizana mandrindra sy manatevin-daharana ny resaka, avy eo manodinkodina ny serasera ho serivisy na varotra.
Mamakafaka - manara-maso sy mihaino kaonty tompony ary mahazoa hevi-baovao amin'ny media sosialy momba ny teny lakile sy ny sentiment.
Faharanitan-tsaina artifisialy - Salesforce Einstein dia azo ampiasaina hanasokajiana ho azy ny sary amin'ny alàlan'ny toetra amam-panahy mba hahazoana fomba fijery lalindalina kokoa momba ny firosoana.
Inona ny sehatra Media Sosialy Orinasa tsara indrindra?
Tsy ny sehatra media sosialy rehetra dia noforonina isaky ny fiasa hitanao etsy ambony. Nampahery ny mpanjifako foana aho mba handalo dingana isaky ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia marketing izay matetika tsy misy ny lazan'ilay lampihazo, ny loka na ny fankatoavan'ny orinasa antoko fahatelo.
Atombohy amin'ny tanjonao - inona no ezahanao tratrarina miaraka amin'ny sehatra media sosialy? Fantaro ny olana, ny fiatraikany amin'ny fikambanana misy anao, ary ny sanda omena vahaolana lehibe. Izany dia afaka mampiditra ny tahiry amin'ny automatisation anatiny, ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara kokoa miaraka amin'ny angon-drakitra tena izy, na ny fitomboan'ny fihazonana noho ny fanandraman'ny mpanjifa tsara kokoa.
Fantaro ny loharanonao - inona avy ireo loharanon-karena anatiny (olona, ​​teti-bola ary fandaharam-potoana) tokony hifindranao amin'ny sehatra vaovao. Manana kolotsaina fananganana zanaka ve ianao? Manana ekipa afaka miatrika adin-tsaina amin'ny fianarana sy mifindra amin'ny rafitra vaovao ve ianao?
Fantaro ny fizotran'ny ankehitriny - Araho ny ekipanao anatiny manomboka amin'ny fitantanana ka hatrany amin'ireo mpiasanao miatrika mpanjifa amin'ny fizotran'ny media sosialy izay anananao ankehitriny. Fantaro hoe aiza ny fahasosorana ary koa ny fankasitrahana ireo sehatra sy fizotrany ankehitriny. Izany dia hiantoka anao hisafidy vahaolana hanatsara ny ezaky ny fikambanana fa tsy handratra azy ireo. Izy io dia azo atao anaty lisitra miavaka amin'ny fanombanana ny sehatra media sosialy manaraka.
Tombano ireo mpivarotrao - Ampitahao ny loharano sy ny fizotranao amin'ny mpivarotra tsirairay ary alao antoka fa mahafeno ny fahaiza-manao rehetra ilainao izany. Mety misy ny dingana sasany izay mila vahaolana mandritra ny fampiharana na ny fifindra-monina… fa miezaha hamantatra ny fomba hanatanterahanao amin'ny antsipiriany ny fizotrany tsirairay mba hanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny fananganana zanakao.
Fandrefesana ny fotoana mety - Raha mampiasa vola amin'ny sehatra samihafa ianao, dia manana fampiasa vaovao matetika manome fotoana hanatsarana ny fiverenanao amin'ny fampiasam-bola teknolojia.
Ny famindrana ny ezaka ataon'ny haino aman-jery sosialy mankany amin'ny sehatra vaovao dia mety ho fampanjariam-bola mahafa-po amin'ny ezaka varotra nomerika sy varotra ataon'ny orinasanao. Safidio am-pahendrena… ary aza misalasala hiara-miasa a mpanolo-tsaina na mpandalina izay mahazatra ny indostria ary afaka manampy anao hanombatombana sy hisafidy ny mpivarotra manaraka anao.
Tags: haino aman-jery sosialy orinasafisehon'ny haino aman-jery sosialy orinasasehatra media sosialy orinasacrm sosialyhaino aman-jery sosialyfanadihadiana amin'ny media sosialyfitehirizan-tseraserafanarahan-dalàna amin'ny media sosialymedia sosialy crmfitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa media sosialysehatra marketing ara-tsosialy haino aman-jery sosialyantonony ny haino aman-jery sosialyfanaraha-maso ny media sosialyfamoahana media sosialyFitsipika momba ny haino aman-jery sosialyfandaharam-potoana amin'ny media sosialysyndication media sosialyfivezivezena amin'ny media sosialy
Kamua: Fampiasana AI hanamboarana endrika endrika famerenana horonantsary
Fironana famolavolana mailaka ho an'ny 2021
May 20, 2013 amin'ny 10: 59 AM
Hey Doug, hevitra tsara! Shoutlet dia sehatra mahery vaika, azo antoka izany! Manantena aho fa salama ianao.